Brezila: Mipariaka Manerana Izao Tontolo Izao Ny “Pinheirinho Daholo Izahay Rehetra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2012 9:22 GMT
[Amin'ny teny Portiogey avokoa ny rohy rehetra, raha tsy efa misy filazana manokana.]
Breziliana maneran-tany, sy olom-pirenena avy amin'ny firenen-tsamihafa, no nifanentana an-tserasera ary nikarakara hetsim-panoherana manerana ny tanàna maro toy ny tao Paris, Madrid, Berlin, Boenos Aires, sy ny maro hafa, ho fanohanana ny fokonolona ao Pinheirinho. Tamin'ny fomba feno herisetra no nandroahan'ny polisy miaramila avy ao São Paulo sy ny Mpitandro ny filaminana avy ao an-tanànan'ny Sao Jose dos Campos ireo vondron'olona ireo, ka nanjary nalaza ny fiantsoana izany hoe “Fandripahana tao Pinheirinho.”
Mpampianatra, Lúcio Flávio de Almeida naneho hevitra hoe:
Noesorina ireo mpitolona ao Pinheirinho ka niatrika fahasahiranana tanteraka, izay fahasahiranana tena lalina. Na dia izany aza, mitohy ny tolona ataon'izy ireo, izay tolontsika ihany koa. Tao anatin'izany, niha-nahazo hery ny tolona ary tokony mbola hihamafy hatrany.
Nitambatra tao amin'ny Facebook, bilaogy ary teny an-dalana ireo olom-pirenena mpanohana tamin'ny alalan'ny teny tarigetra hoe “Pinheirinho Daholo Izahay Rehetra”. Manazava toy izao ny hetsika notantaraina tao amin'ny bilaogy Vi o Mundo:
Vahoaka avy amin'ny tanàna maro manerantany no nitambatra tamin'ny tambazotra an-tserasera mba haneho ny fahatezeran'izy ireo manoloana ny zava-miseho ao Brezila. Breziliana izy ireo ary olona avy amin'ny firenen-tsamihafa mikasa hiaro ny zava-mihatra amin'ireo fianakaviana ao Pinheirinho mba tsy ho adinoina mora foana.
Mpitolona Erick Cristiano namoaka lahatsary misy ny hetsika manerantany izay nalefany tao amin'ny YouTube:
“Eu sou do país dos Pinheirinhenses” (Avy ao amin'ny firenena Pinheirinese aho) no teny filamatr'ireo vondrona mpitolona izay navoaka tao amin'ny Tumblr “Iza no firenenao?”, izay ahitana lahatsary am-polony avy amin'ny olona maneho ny firaisankinany amin'ireo vahoaka voaraoka tao Pinheirinho, tahaka ity nataon'ny mpisera engenhoso manaraka ity:
Tamin'ny 27 Janoary, nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny Ambasady Breziliana ao Madrid, renivohitr'i Espana ny vondrona Breziliana miaraka amin'ny soram-baventy sy saina Breziliana.
"Firaisankina miaraka amin'i Pinheirinho. Breziliana ao Madrid". Hetsim-panoherana ao Madrid. Sary avy amin'i Fábio TQrz, nahazoana alalana
Namoaka taratasy fitarainana ihany koa ny vondrona, amin'ny teny Portiogey sy Espaniola, izay miampanga ny filohan'i Brezila, Dilma Rousseff, sy ny Sekreteram-panjakana manokana misahana ny Zon'olombelona, mangataka ny vondrona ny mba handraisan'izy ireo vahaolana ho an'ireo tsy manan-kialofana ao Pinheirinho.
Mpanao fihetsiketsehana miresaka amin'ny sekreteran'ny Ambasady rehefa tsy nety nandray azy ireo ny masoivoho. Sary avy amin'i Fábio TQrz, nahazoana alalana
Miaraka amin'ny sora-baventy sy sainam-pirenena ireo Breziliana monina ao Lisbon, Portigey, manao hetsim-panoherana eo anoloan'ny Konsiolàn'i Brezila ao an-toerana tamin'ny 2 Febroary lasa teo, ary nandehandeha manerana ny afovoan-tanànan'i Lisbon izy ireo, saingy alohan'ny hanaovana ny hetsika, nanambara ny konsily fa efa namoaka ny heviny ny governemanta mikasika ny zava-mitranga ao Pinheirinho.
Fihetsiketsehana ao Lisbon. Sary avy amin'i Soraya Barret, nahazoana alalana
Tamin'ny 31 Janoary, latsaky ny 10° degré ny maripana, nanao fihetsiketsehana tao Berlin ny Breziliana miaraka amin'ny sora-baventy lehibe mivaky hoe “Wir Sind alle Pinheirinho” ary antso hafa ihany koa mitaky ny fampitsaharana ny politika fanadiovana ara-tsosialy ao Sao Paulo. Namoaka ny fihetsiketsehana amin'ny teny alemana tao amin'ny aterineto ny vondrona. Navoaka an-tserasera ihany koa ny lahatsary ahitana ny hetsim-panoherana tao Berlin.
"Pinheirinho Isika Rehetra". Sary avy aminn'i Christian Russau, nahazoana alalana
"São Paulo: Atsaharo ny politikan'ny fanadiovana". Sary avy amin'i Christian Russau, nahazoana alalana
Tamin'ny 4 Febroary lasa teo, Breziliana teo amin'ny 50 teo no nanao fihetsiketsehana tao Paris, renivohitr'i Frantsa, miaraka amin'ny sora-baventy marobe amin'ny teny frantsay sy Portiogey, teo anoloan'ny Ambasady Breziliana ao an-toerana ihany koa no nanaovana ny hetsika. Na dia izany aza, tsy navelan'ireo polisy frantsay hanohy ny hetsika elabe ireo mpitolona, ka naparitany izy ireo avy eo, nilaza ihany koa izy ireo fa voarara ny maka sary manodidina ny ambasady. Vondron'olona vitsy sisa no nitsangana teny amin'ny toerana akaiky.
Fihetsiketsehana tao Paris. Sary avy amin'i Dudas Bastos, nahazoana alalana
Nisy ny vondrona Facebook natsangana ahitana soratra amin'ny teny frantsay hoe, fihetsiketseham-piraisankina miaraka amin'i Pinheirinho. Daniel Ybarra, ao amin'ny Facebook, nanambara fa efa nalefa tany amin'ny governemanta Breziliana ny taratasy nalefan'ny vondrona any amin'ny Ambassady Breziliana .
Fihetsiketsehana tao Paris. Sary avy amin'i Maite Weill, nahazoana alalana
Hetsim-panoherana hafa koa no niseho tao Buenos Aires, Arzantina, izay ahitana olona 30 farafahakeliny nidina teny an-dalana niainga teny “Obelisco”, no sady mihirahira.
Fihetsiketsehana tao Buenos Aires. Sary avy amin'i Victoria Vajda, nahazoana alalana
Tao Santiago, Shily, olona 20 farafahakeliny no nifamory tao amin'ny Plaza de Los Heroes, toerana misy ny ambasady Breziliana. Nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana ihany koa ny Shiliana sasany. Tao Natal, ao Rio Grande do Norte, ao Brezila, nisy fihetsiketsehana tamin'ny 31 Janoary ary tao Curitiba, tazana nandritra ny lalao football niadiana ny tompondaka Paranaense ny sora-baventin'ny fihetsiketsehana.
Sary avy amin'i Rodrigo Tomazini, nahazoana alalana
Natsahatr'ilay mpanatontosa sarimihetsika Pedro Rios Leão ihany ny fitokonany tsy hihinan-kanina taorian'ny 11 andro. Nitokona tsy hihinankanina toy izany koa ilay mpitolona Alysson Bordi saingy tsy maintsy najanona izany noho ny fitsaboana natao azy tao amina toeram-pitsaboana iray tamin'ny 7 Febroary. Na dia izany aza, nanoratra fanambarana izy fa rariny ny antony nahatonga azy hitokona tsy hihianan-kanina ary nangataka izy mba hotohanana izany. Tamin'ny Alahady, nandroaka ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitolona hafa nanohana an'i Pedro ny polisy monisipaly ao an-tanànan'i Rio de Janeiro :
Ry namana, nanatanteraka ny baiko ny polisy monisipaly omaly ka tonga teny an-toerana nandroaka anay. Rehefa namoaka kobay sy nandrahona hamono anay izy ireo, dia nandeha niala nandao anay. Tao anatin'izany, very ny findaiko sy zavatra hafa tety amiko. Nikorontan-tsaina tanteraka ny toby no sady very fanahy. Masoandro mibaliaka, fotoana ratsy indrindra nandritra ny hetsika, nanomboka nahatsiaro tsy salama aho
Vao maraimbe dia tonga namonjy ny fihetsiketsehana ao an-tanàna ny mpamono afo sy ny mpitandro ny filaminana mba hanohana ny fitokonana tsy hihinankanina nataon'i Pedro izay feno 11 andro tamin'ny zoma 8 Febroary teo, andro nijanonany tamin'izany:
11 andro tsy nahatsiaro tsiro-tsakafo, 12 kilao no very tamiko. Inoako fa mety hanova zavatra izany. Tsy hangataka fifonana aho ny amin'ny voka-dratsin'izany. Satria fanandramana ihany izany.
Mpitolona manohana ny fitokonana tsy hisakafo ataon'i Pedro Leão. Sary avy amin'i Pedro Leão, azo ampiasaina.
Tamin'ny 2 Febroary, nahangona olona maherin'ny 5000 ny hetsika lehibe teny amin'ny araben'i São José dos Campos mba hanoherana ny zavamisy sy hanehoana firaisankina miaraka amin'ny mponina ao Pinheirinho.
Nandritra izany, nisy ny hetsika fanangonam-bola nokarakaraina ka fanerena goavana ho an'ireo mpanao politika izany mba handraisan'izy ireo fepetra manoloana ny herisetra tsy mifandanja sy ny fanampiana ireo fianakaviana voaraoka ka mila vonjy .